Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Malta waxay u furan tahay dadka Maraykanka ah ee la tallaalo
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Wararka Jabhada Malta • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Muuqaalka hawada ee Saddexda Magaalo, Vittoriosa, Senglea iyo Cospicua
Michelle Buttigieg, oo ah Wakiilka Waqooyiga Ameerika ee Hay'adda Dalxiiska Malta, oo ka qeybgashay Toddobaadka Socdaalka Virtuoso, ayaa war wanaagsan u keentay La -taliyeyaasha Socdaalka Virtuoso oo ay la kulantay. Malta, oo ah jasiirad ku taal badda Mediterranean -ka, ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay u furan tahay dadka Mareykanka ah ee la tallaalay kuwaas oo xaqiijin kara macluumaadkooda caafimaad iyagoo adeegsanaya app digital ah oo la yiraahdo Verifly. Marwo Buttigieg waxay xustay in “Malta, hadda, ay xitaa haysato wax ka badan si ay u siiso socotada raaxada leh hoy cusub oo shan-xiddigle ah, xaaladda fayo-qabka/isbaarooyinka cusub, makhaayadaha Michelin Star iyo waaya-aragnimadeeda.
Malta waxay bixisaa cuntada ugu dambaysa ee raaxada, oo ay ka muuqato hoyyo raaxo leh oo kala duwan oo ka kooban guryaha shan-xiddigle ah, huteelo raaxo leh oo raaxo leh, ilaa dabaqyo taariikhi ah iyo guryo-beereed.
Booqdayaashu waxay kaloo ku raaxaysan karaan waayo-aragnimooyin la hubo oo laga bilaabo socdaallada saacadaha dambe ee goobaha taariikhiga ah si loo kiraysto doonyaha.
Malta si fudud ayaa looga heli karaa marinnada waaweyn ee Yurub.
Michelle Buttigieg ayaa sidoo kale xustay inay jirto xiiso weyn iyo xamaasad ka dhex jirta La-taliyayaasha Virtuoso si ay u awoodaan inay macaamiishooda u siiyaan waayo-aragnimo raaxo leh meel Ingiriisiga lagaga hadlo, oo aan ka dad badnayn jiidashada taariikheed ee Yurub ee caanka ah, iyo kala duwanaanshaha noocaas ah in ay jirto wax qof walba. "Malta waxay bixisaa cuntada ugu dambaysa ee raaxada, oo ay ka muuqato hoyyo raaxo leh oo kala duwan oo ka kooban shan xiddigood, huteelo raaxo leh, ilaa qasriyo taariikhi ah iyo guryo beereed," ayay tiri Marwo Buttigieg. “Soo-booqdeyaashu waxay kaloo ku raaxaysan karaan waayo-aragnimooyin la hubo oo laga bilaabo socdaallada saacadaha dambe ee goobaha taariikhiga ah si loo kireeyo doonyaha. Dhammaan waayo -aragnimadan raaxada ah waxaa laga heli karaa Malta wax aad uga yar marka la barbar dhigo qiimaha hoyga la midka ah iyo safarada gaarka ah ee dhul -weynaha Yurub. ” Malta si fudud ayaa looga heli karaa marinnada waaweyn ee Yurub.
Toddobaadka Socdaalka Virtuoso Las Vegas waa dhacdada ugu dambaysa ee sanadlaha ah ee socdaalka beesha caalamka ee dhammaan Xubnaha Virtuoso, La -taliyayaasha, iyo Shuraakada La Doorbiday. Kaliya shabakadda Virtuoso, waxay ka kooban tahay ballamo isku xirnaanta shaqsiyeed, fursado horumarineed oo ballaaran oo xirfadeed, Globetrotting Community, iyo dabbaaldegga Virtuoso, oo ah shabakadda safarka ugu qaalisan adduunka.
The jasiiradaha qoraxda ee Malta, badhtamaha Badda Mediterranean-ka, waxay hoy u tahay diirad aad u layaab leh oo ah hidaha la dhisay, oo ay ku jiraan cufnaanta ugu sarreysa ee Goobaha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO meel kasta oo ka mid ah qaran kasta. Valletta, oo ay dhiseen Knights-kii kibirka lahaa ee St. John, waa mid ka mid ah meelaha UNESCO iyo Caasimaddii Dhaqanka ee Yurub ee 2018. Aabbaha Malta ee dhagaxu wuxuu u dhexeeyaa qaab dhismeedka dhagaxa xorta ah ee ugu da'da weyn adduunka, ilaa mid ka mid ah Boqortooyadii Ingiriiska hababka difaaca ee ugu cabsida badan, waxaana ka mid ah isku -dhafka hodanka ah ee dhismaha, diinta iyo dhismaha milatariga laga soo bilaabo qadiimiga, dhexe iyo xilliyadii hore ee casriga ahaa. Iyada oo leh cimilo qorax leh, xeebo soo jiidasho leh, nolol habeennimo oo wanaagsan iyo 7,000 oo sano oo taariikh xiiso leh leh, waxaa jira wax badan oo la arko oo la sameeyo. www.visitmalta.com